Inkukhu yetshizi kunye nePotato Casserole (Itshizi kakhulu!) - Iiresiphi
Inkukhu yetshizi kunye nePotato Casserole
I-cheesy chicken potato casserole sisidlo esifanelekileyo sobusuku obuxakekileyo kunye nosapho olulambileyo!
Inkukhu kunye namazambane zifakwe ngokukhawuleza kwi-sauce ye-ranch cream emuncu, igalelwe ushizi, kwaye ubhaka kuze kube yigolide.
Esi sidlo siyakhawuleza ukwenza kwaye siyakuthanda kuba asinxibanga kakhulu.
Intwana yekhrimu emuncu kunye nefama kunye nefama yokunxiba ibabalwe ngakumbi ngezinongo zethu esizithandayo.
Le yeyona ndlela ilungileyo yokusebenzisa ukutya okushiyekileyo kwifriji yakho. Tshintsha inkukhu eseleyo, i-turkey eyosiweyo , okanye iityhubhu ze ham. Yiba nezongezelelweyo imifuno egcadiweyo okanye i-broccoli eshushu ? Yongeza kubo!
IITApile Iitapile zomntwana ezinezikhumba zazo zithetha ukungaxobuki kunye nokulungiselela ngokukhawuleza okongeziweyo. Naluphi na uhlobo lwezambane lusebenza kakuhle kwi-casserole, kunye namazambane amnandi ayindlela yokukhetha!
INYAMA Bacon Crispy ingaba yenziwe ngaphambili kwi-oven kwaye yavuthuluka. Sebenzisa okuseleyo okanye nokuba rotisserie inkukhu ukwenza oku ngokukhawuleza. Okanye zama ukubilisa inkukhu, iyakhawuleza kwaye ijika ibenencasa ngalo lonke ixesha.
I-SOUCE Le casserole inencasa ngaphandle kokuba nesosi kakhulu. Ukhilimu omuncu kunye netshizi zenza le casserole ibe nencasa kwaye songeza kwizinongo zethu esizithandayo.
Kukho iinguqulelo ezininzi kule casserole, unokwenza owakho umsebenzi wobugcisa!
IMIFUNO Yongeza imifuno eyongezelelweyo efana ne-broccoli enqunqiweyo, amakhowa asikiweyo, ii-ertyisi, okanye i-veggies enomkhenkce (yinyibilikise kuqala)!
I-SOUCE Yongeza itoti yesuphu yenkukhu okanye i-1/4 yekomityi yesosi eshushu ye inyathi inkukhu casserole .
TOPPING Hlanganisa ngokweresiphi kwaye wongeze i-anyanisi eqhotsiweyo yaseFransi okanye udibanise umxube olungiselelweyo wokupakisha kwi-cheese topping.
Uyenza njani inkukhu kunye nePotato Casserole
Pheka iitapile ezisikiweyo emanzini anetyuwa. Khupha kwaye ubeke bucala (ngeresiphi nganye engezantsi).
Qhotsa i-cubed chicken kunye ne-seasonings. Xuba nebhekoni, itswele eliluhlaza, kunye neetapile.
Hlanganisa i-sauce kwaye ugalele phezu kwenkukhu kunye neetapile.
Phezulu ngeshizi eseleyo kwaye ubhaka ungagqunywanga.
Ngaphezulu kweeCasseroles ezitshizi
I-Cheesy Ham Casserole - abantwana bathanda esi sidlo
Velveeta Mac kunye netshizi – 5 star iresiphi
I-Creamy Baked Tortellini – kunye ham
I-Cheesy Chicken Casserole -elula ozithandayo
Inkomo yeCheesy kunye neMacaroni Casserole – kuhlahlo lwabiwo-mali-friendly
Kabini Baked Potato Casserole -Intandokazi ye-potluck
I-Cheeseburger Casserole - itshizi kakhulu
Ngaba usapho lwakho luyayithanda le Nkuku kunye nePotato Casserole? Qinisekisa ukushiya umlinganiselo kunye nenkcazo apha ngezantsi!
Ixesha lokulungiselelaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha Lokupheka55 imizuzu Ixesha elipheleleyoNye yure 10 imizuzu Iinkonzo6 Umbhali Holly Nilsson Le Cheesy Chicken Ranch Casserole igcwele iitapile, ibhekhoni, kunye nenkukhu, zibhakwe kunye kwisasi yetshizi, ekhrimu yefama!
▢3 amabele enkukhu ityhubhu
▢Mbini iiponti iitapile ezibomvu
▢½ indebe impahla yokunxiba evenkileni okanye eyenzelwe ekhaya
▢½ indebe ikrimu emuncu
▢½ icephe ipepile nganye, umgubo ikonofile, idile, neparsley
▢1¼ indebe itshizi i-shredded, yahlulwe (i-cheddar okanye umxube owuthandayo)
▢8 izilayi inyama yehagu iphekiwe, ikhrisimesi & ishwabene
▢4 itswele eliluhlaza yasikwa kancinci
Preheat oven ukuya kwi-375°F.
Geza amazambane kwaye unqumle kwii-cubes ezi-1. Yizisa imbiza enkulu yamanzi anetyuwa ekubiliseni. Yongeza iitapile kwaye upheke imizuzu eyi-12-15 okanye de kube ithenda.
Okwangoku, ixesha lenkukhu kunye netyuwa kunye nepepper. Ngaphezulu kobushushu obuphakathi, yiqhotse inkukhu kude kube kungabikho ipinki ehlalayo (malunga nemizuzu emi-6-8).
Kwisitya esiphakathi, hlanganisa isinxibo sefama, ukhilimu omuncu, ¾ ikomityi yesonka samasi, kunye nezinongo. Xuba kakuhle.
Beka inkukhu kunye namazambane kwi-pan ye-9x13 egayiweyo. Gcoba isiqingatha sebhekoni kunye nesiqingatha se-anyanisi eluhlaza. Beka i-sauce phezulu.
Phezulu ngetshizi eseleyo kwaye ubhake imizuzu engama-35 ungagqunywanga okanye ude ube mdaka kwaye ugqabhuke.
Susa kwi-oven, ufefe nge-bacon eseleyo kunye ne-anyanisi eluhlaza. Khonza ngekhilimu emuncu ukuba unqwenela.
Ukuqhola ngokuzikhethela: Endaweni yokufefa itshizi ngaphezulu, dibanisa itshizi kunye ne-1 1/2 yeekomityi ze-cornflakes, zityunyuzwe kancinane kunye namacephe amathathu anyibilike ibhotolo. Fafaza phezu kwe-casserole ngaphambi kokubhaka. Gcina okushiyekileyo kwisingxobo esingangeni moya efrijini ukuya kutsho kwiintsuku ezi-4.
Iikhalori:589,Iicarbohydrates:27g,Iprotheyini:37g,Amafutha:37g,Amafutha aGqithisiweyo:13g,ICholesterol:133mg,Isodium:734mg,Potassium:1249mg,Ifayibha:3g,Iswekile:3g,IVithamin A:490IU,Ivithamin C:17mg,Ikhalsiyam:224mg,Iayini:Mbinimg
IkhosiI-Casserole, inkukhu, isidlo sakusihlwa, i-Entree, i-Main Course
Iholide Ne Seasonal Izixhobo Ulutsha Imiboniso Bhanyabhanya Isaphulelo Ukuthenga Umlibo Wokuzalwa Uphando Ukukhulelwa Nokuqeshwa
Ungayichitha inja ixesha elingakanani emva kobushushu?
zingaphi iziselo ezikwibhotile yewayini
indlela yokususa i-lash extensions ekhaya
Ungayinyanga njani iparvo kwiinjana
indlela yokudlala umdlalo webhodi